Haisoratra: mikasa hanao hetsika maro sy hamoaka boky i Tsiresy Kely | NewsMada
Haisoratra: mikasa hanao hetsika maro sy hamoaka boky i Tsiresy Kely
Randrianarivony Tsiresy na fantatra amin’ny solonanarana hoe Tsiresy Kely eo amin’ny sehatry ny literatiora. Mpikambana ao amin’ny Havatsa Upem ny lehilahy, maro ny vina hotanterahiny amin’ity taona ity…
“Tadidiko, nampanao entimody famoronana angano ny mpampianatra iray fony aho mbola mpianatra tany amin’ny kilasy taona faha-7. Saika tsy nino anefa ilay mpampianatra hoe vao noforonina ny ahy, rehefa avy novakiny ny zava-bitako. Noho izaho mbola ankizy angamba ny antony. Tamin’izany anefa, tsy mbola nieritreritra ny hanoratra aho. Fa taty aoriana, niditra teo amin’ny sehatry ny fitiavana, dia voadonadona matetika ka nifoha ny aingam-panahy. Telo taona lasa teo ho eo izay”, hoy i Tsiresy Kely, raha nilaza ny antony nanoratany. Fifaninanana roa ny efa nahitana ny anarany raha teo amin’ny sehatry ny literatiora. Voalohany, fifaninanana “Valin-taratasy ho an’olon-tiana”, nokarakarain’ny FMMS (Fikambanan’ny mpanoratra sy mpankafy sombintantara) sy ny RNM, tamin’ny volana febroary 2019 izay nahazoany ny laharana voalohany tamin’izany. Faharoa ny fifaninanana nokarakarain’ny Mada Appli hampidirana asa soratra tao anaty rindrambaiko am-pinday (application mobile) “Poety Malagasy”. Tafiditra tao anatin’ireo 10 mendrika indrindra tao ny asa soratr’i Tsiresy Kely. Natao tamin’ny volana jona 2020 lasa teo io, nankalazana ny iray volan’ny teny malagasy. Tsotra ny tanjona kanefa mavesa-danja, ny tsy hampatory intsony ny talenta ao anaty fa hampivelatra izany hatrany ka ho zary fanasoa ho an’ny mpiara-belona sy ny firenena.
200 mahery eo ny asa soratr’i Tsiresy Kely. Mikasa hanao hetsika maromaro, amin’ity taona ity, ary hamoaka boky mihitsy. Tsy natao hirotorotoana mantsy itsy farany fa aleo manomana zavatra tsara sy masaka mba tsy ho mora ho levon’ny fotoana mandalo, ary mba ho lova soa ho an’ny taranaka any aoriana ihany koa. Tsy mahay mifanara-tsaina loatra koa ny vita maika sy ny vita tsara.